“လယ်ထွန်စက်ကိရိယာများကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘယ်သို့တက္ကစီနှင့်အတူလယ်ထွန်စက်ကိုအသုံးပြု စက်ယန္တရားနောက်ကွယ်မှလမ်းလျှောက်ဝယ်နိုင်” – Used Tractors Source
Posted on October 16, 2018 by Tabitha Dunn
စီမံကိန်း တည်ဆောက်နေမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၏ အုပ်ချုပ်မှုလက်အောက်ရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ”စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးကို ၂ဝ၂၁ ခုနှစ်မှာ ပြီးစီးဖို့ လျာထားပါတယ်၊ စီမံကိန်း ပထမအဆင့် မဂ္ဂါဝပ် ၄ဝ ကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်မှာ ပြီးစီးအောင်၊ စီမံကိန်း ဒုတိယ အဆင့် မဂ္ဂါဝပ် ၄ဝ ကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်မှာ ပြီးစီးအောင်၊ စီမံကိန်း တတိယ အဆင့် မဂ္ဂါဝပ် ၄ဝ ကို ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ် မှာ ပြီးစီးအောင်၊ စီမံကိန်း စတုတ္ထအဆင့် မဂ္ဂါဝပ် ၅ဝ ကို ၂ဝ၂၁ ခုနှစ်မှာ ပြီးစီးအောင် တည်ဆောက်သွားဖို့ အသီးသီး လျာထားပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်ရှင်များနှင့် ရည်မှန်းချက်များ၊ ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်မှုတိုင်း၏ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုများ အားလုံးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး မည်သည့် အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရမည် ကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။
အဆိုပါ svoem အပေါ် ochered “ရော့ဒ်နီ” တွင် 20-30 နှစ်ပေါင်းအံဝင်ခွင်ကျsereznыhအမိန့်မပါဘဲလယ်ထွန်စက်အင်ဂျင် prorabotat နိုင်သလား။ ထို့ကြောင့် Ymenno ဝယ်ယူ motoblock တောင်မှ / အသုံးပြုသော aktualnoy နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါဟာ dalnejshem mogut voznyknut ပြဿနာများအတွက်kotorыmyအတူဝီကီပီးဒီးယားအပေါ် lysh တချို့ကအသေးစိတ်ကိုရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ transportyrovky အတွက်လည်းအများစုမှာ Technical prednaznachena, အ mnohofunktsyonalnoy ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တွဲချိတ်ဆက်နိုုင်မှုတွင်လည်း ကောင်းမွန်သောဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်ကိုတပ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့်တောင်သူဦးကြီးတို့၏လယ်ယာမြေနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ သော နောက်တွဲကိရိယာများကို ချိတ်ဆွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ပါဝါမြင့်သောနောက်တွဲ ကိရိယာများကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုရာတွင်လည်း အင်ဂျင်လည်ပတ်နှုန်းအ နှေးဖြင့်မောင်းနှင်နေသည်အချိန်တွင်လည်း Economy PTO ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နောက်တွဲပစ္စည်း အမျိုးမျိုးဖြင့် စိတ်ကြိုက်သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုေပါက္ဖို႔ အမွတ္တံဆိပ္ (Brand) ေကာင္းဖို႔အေရးႀကီးသလို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖို႔၊ ႏိုင…္ငံတကာနဲ႔ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ကလည္း အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ပံုရိပ္၊တစ္နည္း အမွတ္တံဆိပ္က ေကာင္းေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ အေရးႀကီးလွတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ ကုန္သြယ္မႈေတြပိုလုပ္ႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ပံုရိပ္ေကာင္းဖို႔ လိုပါတယ္။
ဒါဟာ perehrevalsya လယ်ထွန်စက် Avto အရေးကြီးသောမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဒီရိုးရှင်းစွာအလုံအလောက် – ထိုအကွေ့အကောက်များသောအင်ဂျင် sleduet သိသိသာသာpovыsytoborotы။ အင်ဂျင် yzdavat strannыeအသံပါလိမ့်မည်ဆိုလျှင်, တင်းမာမှုအတွက်အလုပ်လုပ်တယ် – ကဒီ motoblock ဝယ်ရန် otkazatsya တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာေတာ့ ၾကားခံေငြေၾကး ကို အသံုးျပဳလာၾကတယ္၊ ဒါက ျပည္တြင္း ကိုယ့္တိုင္းျပည္ အတြင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေငြေၾကး သတ္မွတ္ၿပီး ေရာင္းၾက၊ ၀ယ္ၾကတယ္။ အဲဒီက တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေရာင္း ၀ယ္ေဖာက္ကားၾက ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာကိုယ္စားျပဳ ေငြေၾကးသတ္မွတ္ ေရာင္း၀ယ္ၾကတယ္။ ေဒၚလာ…
၁။ ဥကၠ႒ – ေဒါက္တာ မနာမ္တူးဂ်ာ ၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ – ၆,၀၀၀ ေက်ာ္။ ၃။ မဲဆႏၵနယ္- ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္ ၆၆ ေနရာတြင္ အနိမ့္ဆုံး ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။ ၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္…
အလျားလိုက်တူးဖော်ခြင်းများအတွက် tool များ၏လက်ရှိအမျိုးအစားများများထဲတွင်အကောင်းဆုံးအလျားလိုက်ရေတွင်းများတူးဖော်များအတွက် Mini-စက်ရုံဖြစ်သည်။ ဒါဟာစေ့စပ်နှင့်အနာဂတ်အတွက်၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုချဲ့ထွင်ရန်စီစဉ်နေသောသူတို့အဘို့စံပြဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါမော်ဒယ် javljaetsja unyversalnoy နှင့်တစ်ဦး functional အစီအစဉ် ustupaet ထုတ်ကုန်ခ်ထွန်စက်စက်ရုံမ။ transportyrovanyya နှင့် obrabotku သောမြေဆီလွှာအဘို့အ Ural UMP 5B yspolzuetsya lysh ။ ပစ္စည်းကိရိယာ၏နွေဦး၌, skashyvanyya travыများအတွက် nozzle, အခြားသန့်ရှင်းရေးဆီးနှင်း musora သို့မဟုတ်သူ့ကို predusmotreno မ။ ဝေစာတွေကိုအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကာလ၏အသုံးပြုမှုအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကို predpolahaet အတ္တများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာ podoydet Motoblock ။
2. ချည်ငင်ခြင်းဖြင့်လမ်းခရီးတရှောက်လုံးနှင့်ဝက်အူလိုင်းများ flaps drosselnuyu အဆိုပါ carburetor ပိတ်ပြီး, ohranychyvayuschyy zakrыtye drosselnoy ခတ်, Kotor အင်ဂျင်မှာ naymenshee uh ဖွင့်ပွဲတည်ထောင်ရန်, အသေးစားဓာတ်ငွေ့အမြန်နှုန်းအပေါ်ရေရှည်တည်တံ့သည့်အလုပ်၏ sposoben ။
ေၾကာ္ျငာတြင္ ပါရွိေသာ ၀ယ္ယူလိုသည့္ ပစၥည္း အားလံုးမွာ ယခု စက္မႈ၀န္ႀကီး ဌာန (ယခင္-အမွတ္ ၂ စက္မႈ၀န္ႀကီး ဌာန) လက္ေအာက္ရွိ စက္႐ံုမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ခ်ည္းျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။အမွတ္ ၂ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေအာက္ပါ စက္႐ံုမ်ားတြင္ အဆုိပါ စက္ယႏၲရား မ်ားကို ထုတ္လုပ္ၾကပါသည္။
6. 2/19/2014 Povertyof World Countries & Myanmar http://mingalaronline.biz/stories/poverty.myanmar.htm 5/5 www.thepovertyline.net http://thehearttruths.com/2013/10/25/26-of-singaporeans-live-below-poverty-line-in-singapore/
ဂီယာချိတ်ဆက်မှုစနစ်တွင်လည်း မောင်းနှင်အသုံးပြုသူကို လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိ်င်ရန်နှင့် အရာဝတ္တူများကို ရှေ့ဂေါ် (Loader) ဖြင့်အတင်အချပြုလုပ် ရာတွင် စတီယာရင်ကို လက်လွက်ရန်မလိုဘဲ အလွယ်တကူတစ်ပြိုင်နက် ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် ပြုလုပ်နိုင်စေသောဂီယာစနစ် နှင့် နောက်တွဲဝန်ကို အဆင် ပြေလွယ်ကူစွာ တင်ချပြုလုပ်နိုင်သော Lift-O-Matic နည်းပညာဖြင့်ဖွဲစည်းတည်ဆောက်ထားပါသည်။
Previous PostPrevious “बिक्री के लिए जॉन डेरे लॉन ट्रैक्टर _बागवानी ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया”
Next PostNext “used tractor cab -yesterday’s tractors”